दुई नाकामा ट्रयाक | Epradesh Today
Homeफिचरदुई नाकामा ट्रयाक
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । २०७४ साल असारमा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी भएको छ । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय सरकार अहिले पूर्णरुपमा क्रियाशील रहेको छ । धेरै अपेक्षा, योजना र आश्वासन बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहहरुको एक वर्ष कसरी बितेको छ ? यस अवधिमा अपेक्षा अनुसारको स्थानीय तहमा काम हुनसकेको छ की छैन ? कस्ताखालका समस्या, चुनौती, जटिलता, अवसर भूमिका देखिए ? त्यो विषयमा विशेषरुपमा आज हामीले जनप्रतिनिधिका एकवर्ष अन्तर्गत खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ । यो अंकमा राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज के.सी.सँग उनी निर्वाचित भएपछिको अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेकौ छौँ ।
हामी निर्वाचित भएर आएको एक वर्ष भन्दा धेरै भएको छ । यस अवधिमा हामीले राजपुर गाँउपालिकाको स्रोत साधनलाई अत्यधिक परिचालन गरी हामीले गत आर्थिक वर्षमा गरेका प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्ने कोसिस गरेका छौँ । जनताको अपेक्षाहरु धेरै नै थियो सबै अपेक्षाहरु एकै वर्षमा पूरा ग¥यौँ भन्न त मिल्दैन् । तर सबैका आवश्यकताहरुलाई समेट्ने कोसिस गरेका छौँ । निर्वाचित भएर आएपछि गरेका प्रतिवद्धहरु हामीले केही पूरा गरेका छौँ । केही काम सम्पन्न हुने क्रममै छन् भने अझै काम गर्ने योजनामा छौँ ।
स्थानीय सरकार गाउँ–गाउँमा भने झै यहाँका गाउँपालिकाबासीहरुको अनगिन्ती आवश्यकता, चाहना र समस्याहरु एकै वर्षको प्रयासबाट पूरा हुने सम्भव थिएन । हामीले यहाँको स्रोतले जति समेटन् सक्छ त्यति गरेका छौँ । हाम्रो काँधमा जनताका वर्षौदेखिका अधूरा सपना पूरा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको उपलव्ध सीमित स्रोत साधनको उपयोग गरी जनताका विकासका चाहना पूरा गर्ने, जनतालाई परिवर्तनको महसुस गराउनु र समृद्ध राजपुर गाउँपालिकाको निर्माण गर्ने रहेको छ । अघिले वर्षको स्टिमेटहरु तयार पारेका उधार्ने कामहरु भएका छन् । राजपुर गाउँपालिकालाई भूगोलको रुपमा ठूलो गाउँपालिकाको रुपमा लिएको छ । नाकासँग जोडिएको छ भने यहाँ सडक स्वास्थ्यदेखि शिक्षा सबै क्षेत्रमा समस्या थियो हामीले धेरै नै समस्याको समाधान गरेका छौँ । मुख्य कुरा तह कामीले दुईवटा नाकामा सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेका छौँ । यसलाई हामीले मुख्य उपलब्धि र उदाहरणीय कामको रुपमा लिएका छौँ । देउखुरीदेखि खंंग्रा नाकासम्म एउटा ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ भने सुनपत्रीदेखि सुनपत्र नाकासम्मको अर्को ट्रयाक खोल्ने काम भईरहेको छ । त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा चुलासहितको ग्याँस प्रदान गरेका छौँ । धुवारहित स्वच्छ समाज निर्माणको लागि हामीले यो वडाको स्थानीयबासीहरुलाई चुलासहित सिलिण्डर ग्यास प्रदान गरेका थियाँै । त्यहाँका पाँच सय २५ घरधुरी रहेको स्थानीयहरुलाई यो सुविधा दिएका छौँ । पहिले राजपुर गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सुविधा थिएन् । स्वास्थ्य सेवा लिनको लागि भारत जानुपर्ने यहाँका स्थानीयबासीहरुलाई बाध्यता थियो । अहिले त्यो बाध्यता हटेको छ । किनभने हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमविएस गरेको डाक्टरमार्फत सुविधा दिइरहेको छौँ । त्यस्तै अल्ट्रा साउण्ड मेसिन, ल्यावहरुमार्फत स्वास्थ्य सेवा दिईरहेका छौँ । यहाँ पिकनिक स्पोट निर्माण गरेका छौँ । सडक सञ्जालहरु विस्तार गर्ने काम भएको छ । सडक सञ्जाल भएपछि घण्टौ लगाएर हिड्नु पर्ने समस्याको समाधान भएको छ । गाउँ कार्यपालिकाको बैठक, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट प्राप्त सुझाव, विभिन्न दलका सुझाव, विषयगत कार्यालयहरु, गैर सरकारी संस्था, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज, वैदेशिक सहयोग, दातृ निकायबाट प्राप्त सुझावहरुबाट हामीले गाउँपालिकाको योजना छनौट गरेका हौँ । बस्ती, टोलस्तरीय भेला, वडास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी, एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति हुँदै प्राथमिकीकरण गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु हुन् । राजपुर गाउँपालिकामा यहाँका स्थानीयबासीहरुको सडक, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका पूर्वाधारहरुमा धेरै माग आएको थियो । पहिले वर्ष नियम कानुन बनेको थिएन् । जताततै अन्यौल नै अन्यौल थियो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि हामीले राजपुर गाउँपालिकाका योजनाहरुलाई निरन्तर रुपमा अगाडि नै बढाईरह्यौँ । पहिले वर्ष नै भएर हो जनताको अपेक्षाहरु धेरै आएको थियो । तर क्रमशः बुझ्दै गएपछि अति आवश्यक योजनालाई अगाडि बढाउने भनेर निर्णय भयो र त्यही अनुसार नै काम गरेका हौँ ।
हामीले योजना सम्पन्न गर्नको लागि र जनताको आशालाई निरासामा बदल्न नदिनको लागि हामीले कति कार्यविधिहरु राजपुर गाउँपालिकाले नै बनाएर काम गरेको अवस्था पनि छ । कर्मचारीको पनि त्यत्तिकै अभाव थियो । अहिले पनि छ । कर्मचारी समायोजन विषयले झनै कर्मचारीहरु पनि अन्यौलमा छन् । जसले गर्दा गाउँपालिकाको काम कारवाहीमा समस्या पारिरहेको छ । कानून पूर्णरुपमा भईनसक्दा अझै पनि केही चुनौती पनि छन् । कानुनको अभाव, कर्मचारी समायोजन नभएकाले कर्मचाीको पनि अभाव छ । राजपुर गाँउपालिकाको साँघुरो कार्यालय भवनका कारण पनि काम गर्न समस्या भएको छ । केही कोठाहरु अपुग नै छन् । यी यस्ता समस्या र चुनौती भएपनि हामीले हाम्रो सेवामा कमि आउन दिएका छैनौँ । त्यस्तै राजपुर गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, सडक निर्माणलगायतका कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ । राजपुर गाउँपालिका विकट भनेर चिनिने गाउँपालिका हो । हामी निर्वाचित भएर आईसकेपछि केही सुधार भएको मैले महशुस गरेको छु । गाउँपालिको विकास र सुधार एकै पटक हुने कुरा होइन् क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो । विकट बाटोहरुलाई हामीले मर्मत सम्भार गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । त्यस्तै कृषिलाई बढवा दिनको लागि बोरिङमार्फत सिंचाईको सुविधा दिएका छौँ । खेतीयोग्य जमिनको लागि छुट्टै सिंचाई आयोजनाको काम पनि भएको छ भने खानेपानीको लागि पनि हामीले काम गरेका छौँ । आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक कृषि प्रणालीको शुरुवात गर्ने तथा स्थानीय बाँझो जग्गाहरुलाई खेती गर्न प्रोत्साहित गरीने कार्यक्रमहरु गरेका थियौ । खेतीयोग्य विशेष क्षेत्रलाई प्राङ्गारिक क्षेत्र घोषण गरी प्राङ्गारिक खेती विस्तार गर्दै आधुनिक कृषि पद्धतिको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रको विकासको लागि काम सम्पन्न भएको छ । हामीले यो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यस गाउँपालिकाको सन्दर्भमा यातायात, विकासको पहिलो पूर्वाधार रहेकोले गाउँपालिकामा निर्माण भएका कच्ची बाटाहरुको स्तरोन्नती गरी बाह्रै महिना चल्न सक्ने गरी सुचारु गर्न दीगो मर्मत सम्हारको व्यवस्था गरिने योजना छ । यो चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरु भर्खरै शुरु भएका छन् । धेरैजसो योजनाहरुको स्टिमेट हुने क्रममा छन् ।